Iflethi okanye indlu ekwicomplex enembonakalo yolwandle kunye nentaba, i-150M ukuya elunxwem - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enembonakalo yolwandle kunye nentaba, i-150M ukuya elunxwem
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguOlga
Iflethi okanye indlu ekwicomplex eqaqambileyo. Ithala eliseluphahleni labucala elinendawo yokubraya, iibhedi ezinelanga nendawo yokutyela. I-premium complex. 150 m ukuya kunxweme lwesanti. Iipuli ezimbini zokuqubha, ibhari yaselwandle, i-sauna, ijimu, ivenkile yokutyela, indawo yokoja, indawo yokuqesha izikhephe. Kubantwana - ibala lokudlala labantwana, ipaki yokuhamba, ipuli yabantwana, ibala lebhola encinci. Ipaki yamanzi ikufutshane. Isuphamakethe kunye neevenkile zokutyela ngaselwandle zikumgama wemizuzu eyi-2 ngemoto. Ngaphakathi kukho ibhedi elala abantu ababini, isofa esongwayo kwigumbi lokuhlala, indawo yekhitshi, itafile yokutyela, igumbi lokuhlambela, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kwigumbi ngalinye
Indawo ezolileyo kanye elunxwemeni. Ukuhamba ngemizuzu emi-2 kukho i-marina kunye neendawo zokutyela ezimangalisayo zentlanzi ngaselwandle, kunye nevenkile enkulu. Idolophu yase-Iskele ikumgama wemizuzu eli-10, kwaye iFamagusta ikumgama wemizuzu engama-20. IFamagusta ilikhaya kuninzi lwembali yesiqithi, kunye neevenkile ezininzi kunye neziko lokuthenga apho unokonwabela ukuthenga kwakho ngokupheleleyo. Enye yezona ndawo zinomtsalane kwesi siqithi, amabhodlo esixeko samandulo iSalamis, kukuhamba ngemizuzu eli-15 xa uhamba ngemoto. Idolophu edumileyo yeVorosh yimizuzu engama-25 yokuqhuba.
Ndikulungele ukunika uncedo oluyimfuneko kwaye ndiphendule yonke imibuzo yakho. Uncedo ngokuqasha imoto, ukubiza iteksi, ukulungelelanisa ukudluliselwa, njl. Cebisa iindawo zokutyela, iivenkile kunye nezinto ezikhangayo. Ndikwindawo yecomplex
Ndikulungele ukunika uncedo oluyimfuneko kwaye ndiphendule yonke imibuzo yakho. Uncedo ngokuqasha imoto, ukubiza iteksi, ukulungelelanisa ukudluliselwa, njl. Cebisa iindawo zokutye…